Boqolaal shacabka Muqdisho ah oo sameeyay banaanbax looga soo horjeedo weerarkii masjidka Nabiga - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaBoqolaal shacabka Muqdisho ah oo sameeyay banaanbax looga soo horjeedo weerarkii masjidka Nabiga
July 11, 2016 Abdi Omar Bile Somalia, South-Central 0
Dadka banaanbaxa ka qaybgalaya. Sawirka: Sonna.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Boqolaal shacab ah ayaa maanta oo Isniin ah banaanbax ay uga soo horjeedaan weerarkii masjidka Nabiga ka sameeyay magaalada Muqdisho.
Dadka banaanbaxa ka qayb galay ayaa soo qaatay boorar ay ku qornaayeen “Waxaan diyaar u nahay in aan nafteena u hurno difaaca xaramaynka iyo dhiiga Muslimiinta”.
Banaanbaxa ayaa waxaa soo qabanqaabiyay culimada diinta ee Muqdisho joogta.
Qaar ka mid ah culumadii ka qayb galay banaanbaxa ayaa dad weynaha u sheegay in ay waajib ku tahay qof walba oo Muslim ah inuu ficil muujiya haddii uu dhaco weerarkan oo kale.
4-tii July, ayay ahayd markii qof naftiis halige ah uu isku qarxiyay meel u dhow masjidka Nabiga ee magaalada Madiina, waxaana ku shahiiday afar kamid ah ilaalada amaanka masaajidka.
June 22, 2016 Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud oo Baydhabo tagay
Muqdisho-(Puntland Mirror) Mid kamid ah wariyeyaasha caanka ah ee Soomaaliya ayaa kamid ahaa dadkii ku dhintay qaraxyo ka dhacay Muqdisho maanta oo Sabti ah. Cawil Daahir Salaad, labo ilaaladiisa kamid ah iyo darawalkiisii ayaa ku [...]